Fedora 19: famerenana kely | Avy amin'ny Linux
kik1n | | Fitsinjarana
Afaho ny birao misy anao Fedora.
Fedora dia rafitra miasa ho an'ny fampiasana isan'andro, miavaka amin'ny faingam-pandeha, milamina ary matanjaka. Vondron'olona namana manodidina ny planeta manontolo no manangana azy. Maimaimpoana sy maimaim-poana tanteraka, samy mampiasa azy io, mizara azy na hahafantatra ny fomba fiasany.
Tonga aho Fedora 19, izao hanandramana azy amin'ny kinova KDE.
Anisan'ireo zava-baovao ao aminy:
Fanatsarana nohatsaraina ao amin'ny mpampiditra Anaconda
Fanohanana tsara kokoa amin'ny fanontana 3D
Java 8 (OpenJDK8)
Tonga i Fedora 19 niaraka tamin'ny kernel 3.9.5-301.fc19, fa aorian'ny fanavaozana dia azonao ny kernel kernel 3.9.8-300.fc19.
Amin'ny fizotry ny fametrahana dia tsikaritra ny fanatsarana sasany. Saingy toa maitso foana izy io, maharitra fotoana fohy hanamboarana bibikely.
Safidio ny fiteny.
Amin'ity menio ity dia azonao atao ny misafidy ny fizaranao, ny layout Keyboard;
Ampidiro ny teny miafin'ny Root, toy ny Anaran'ny Mpampiasa, ny Password ary ny permis.
1 Ao amin'ny KDE.
2 YUM sy DNF.
3 Detector mpamily
4 Rehefa avy nametraka ny Fedora 19 tao amin'ny .pdf
Ao amin'ny KDE.
Rehefa tafiditra ao anatin'ny fametrahana vaovao anao Fedora 19, nihaona taminay KDE 4.10.4.
Ny haingam-pandeha sy ny fahamendrehan'ny fampiharana KDE dia mety ho mavesatra indraindray, fa amin'ny GTK dia ankasitrahana maivana izy ireo.
Ny fidirany dia 400 MB ka hatramin'ny 500 MB, ny zava-bitany amin'ny Firefox (Mihoatra ny 5 kiheba), Gimp, Tuxguitar, Netbeans, Clementine (milalao), VLC (milalao sarimihetsika), mahatratra 2.5 GBs ary mailaka .
YUM sy DNF.
Yum, mpitantana fonosana default ho an'ny Fedora ao amin'ny kinova 3.4.3 sy DNF, mpitantana fonosana hafa ho an'ny Fedora 0.3.8.
DNF dia a sotro rovitra an'i Yum ao amin'ny fanjakana beta dia lazaiko fa tena tsy mahita vaovao aho, saingy vitsy kokoa ny baiko ao aminy ary toa milamina izany rehefa manatanteraka:
Mampitaha ny YUM sy DNF dia vitsy ny fahasamihafana ary raha tsikaritra fa kely dia kely. Raha vao tsapa ny DNF dia tsy mamela antsika hanana tsiro ratsy eo am-bavantsika, fa Yum dia tsara kokoa sy feno kokoa.
Monitor ivelany, mpanonta, audio: Tsy misy olana, aorian'ny fametrahana azy dia tsikaritra ho azy ireo.
Horonantsary Ati: Amin'ity tranga ity dia mila mametraka ireo mpamily tompony aho.
1) Rafitra fanavaozana:
su yum fanavaozana -y
2) Apetraho ireo mpamily ATI:
hametraka ianao -y akmod-catalyst xorg-x11-drv-catalyst xorg-x11-drv-catalyst-libs
4) Hanamarina raha miasa ireo mpamily:
glxinfo | grep -i "\_ (omeo \_ | opengl \_)"
Rehefa avy nametraka ny Fedora 19 tao amin'ny .pdf
Tsy afaka nampiasa azy aho fa ity no torolàlana tsotra indrindra.
Miandrasa azy hisintona ireo fonosana rehetra ary hamerina ny rafitra.
Ho hitan'izy ireo ao amin'ny grub «UPGRADE FEDUP» fa mifidy azy izy ireo ary miandry ny hahavitany.
Amboary ny rafitra.
Ny Fedora 19 dia zava-bita lehibe ho antsika izay tokony nampiasa ny kinova taloha, saingy mbola lavitra ny lalana tokony halehany. Raha mitaha amin'ny OpenSUSE 12.3 y ny tadio ireo, Hifikitra amin'ilay farany aho, ho mpinamana kokoa, ary ny vokan'ny famotsorana. Fedora, Te hanana kinova misy fotoana fanohanana lava kokoa na Rolling aho, miaraka amin'izany, hifanatrika ianao openSUSE.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Fedora 19: Famerenana kely
Tsara ny famerenana raha azo lazaina, tsy isalasalana fa iray amin'ireo "Famoahana" tsara indrindra avy amin'ity tetikasa ity: D!
PS: Amin'izao fotoana izao dia efa niandrandra an'ity kinova ity aho, ary ny Gnome 3.8 dia milay be ary manidina amin'ny i5 misy RAM 8 GB!.
Tsy misy olana hatreto.
Eny, miala tsiny amin'izay rehetra namaky ity lahatsoratra ity.
Tena ratsy ny famerenana, raha oharina amin'ny asa teo aloha ary tiako ireo distros rpm.
Nanazava ianao fa famerenana kely io, ary manana finiavana ianao hanao izany. Tsy miala tsiny rangahy, tsara izany. Ratsy loatra ianao nampiasa KDE… ..hahahaha. Manao ahoana izy ao rahampitso raha afaka manandrana ny Spin aho.
Misaotra, fa tsy izay no tadiaviko ho an'i Fedora.
Eny, kde ao amin'ny Fedora hitako fa mavesatra izany raha oharina amin'ny disto hafa, tsy nanantena firy aho, i Fedora dia manam-pahaizana manokana amin'ny gtk.
Saingy manana fonosana bebe kokoa izy ao amin'ny repos rpm fusion, ankehitriny, ary milamina kokoa.
Aleo ianao manandrana an'i Fedora amin'ny birao hafa toy ny kanelina.
Ary ahoana raha mitaraina aho, io no fotoana fanampiana, 9 volana hitako fa fohy dia fohy. Ny repo LTS na RR hafa, toy ny openSUSE dia ho azo ampiasaina.
Te hanandrana ny Mate + Compiz Spin koa aho, hahitako ny fandehany. Amin'ny fomba ampitandremako anao, raha mieritreritra ianao fa amin'ny alàlan'ny fametrahana Gnome-Classic dia hanana kopia Gnome 2.x marina eo alohanao, hadinoy izany, tsy inona izany fa ny Gnome-Shell miaraka amin'ny fanitarana. Raha tianao ny "antsasaky ny kopia" dia mandrosoa.
Ny tena marina dia tiako ny KDE an'i Fedora, manana ny 18 aho mbola tsy nifindra monina ho 19 fa ny fanavaozana dia efa 4.10.4 ary manao fahagagana aho.
Ary amin'ny fitoniana azafady, tsy ampitahaina amin'i Wheezy izy io fa tsara lavitra noho i Kubuntu, hoy hatrany aho fa ireo an'ny Kubuntu dia tokony hafindra ao amin'ny ekipa Debian Qt / KDE, fa ny Ubuntu base dia drag.
Eny, miaraka amin'i Archlinux + KDE aho izao .. hotantaraiko anao izany.
@dhunter dia mamporisika ny openSUSE tumbleweed ho tena tsara aho.
@elav Archlinux + KDE dia tsara foana, ny olana dia ny fitoniana amin'ny fanavaozana.
Tsy azoko mihitsy hoe ahoana ny fiasan'ny fanavaozana ao amin'ny Fedora, ny fametrahana ilay rindrambaiko vaovao indrindra ve raha vantany vao misy toy ny amin'ny famoahana azy io, na miasa toa ny ubuntu izany, manome fanavaozana ny fiarovana fotsiny ary tsy misy kinova vaovaon'ilay rindrambaiko na oviana na oviana?
Miankina amin'ny ankapobeny izany dia mirona "miatrika risika" mihoatra ny Ubuntu amin'izany lafiny izany. Indraindray nohavaozina mihitsy aza ny tontolon'ny birao. Ny fonosana toy ny, ohatra, ny Fampitana (raha tsy hilaza afa-tsy ny kely indrindra) dia mazàna ampitaina amin'ny kinova farany azo antoka. Saingy tsy izany koa Rolling Release toy ny Archlinux mety ho. Asakasak'io.
Ary raha ny momba ny kinova vaovao an'ny kernel dia alaina an-tanana avy amin'ny repos toy ny ao anaty andohalambo, tsy maintsy manangona azy avy amin'ny 0 toy ny amin'ny Ubuntu ianao, sa tsy mitovy izany?
Androany, ny fizarana tsara indrindra amin'ny KDE dia tsy isalasalana fa Chakra. Manome fihodinana arivo an'i Fedora izy amin'ny lafiny fampidirana sy fonosana ho an'ity tontolo ity.
Na dia rehefa manamboatra mpizara na asa sarotra hafa aza dia ankasitrahana ny fitaovana sy ny fikirakirana Fedora.
Ho an'ireo mpampiasa birao izay maniry ny KDE dia tsy hanome izany fizarana izany aho raha tsy amin'ny tranga manokana. Ohatra, mampiasa Fedora miaraka amin'ny KDE amin'ny Macbook Pro aho satria maharitra kokoa ny bateria ary miasa ivelan'ny boaty miaraka amin'ny ankamaroan'ny fitaovana (mihena ny zavatra roa).
Rene Lopez dia hoy izy:
Aza adino ny Rosa Linux .. hehe .. (tsy amin'ny maody Troll)
Valiny tamin'i Rene Lopez
Nanandrana aho ... miadana be ... aleoko ny Kubuntu 13.04 ... balafomanga io !!!
Mahaliana raha nanao ny fanadihadihana niaraka tamin'i Gnome koa izy ireo.
Eto ianao dia manana "flyby" miaraka amin'i Gnome:
Ahoana no itiavako an'i Fedora: D .. Tsy maninona na miaraka amin'ny KDE na XFCE 😀
Eny, fa miandry aho mandra-pivoakan'ny RHEL 7 hisorohana olana amin'ny repos, ny fikorontanan'ny kernel amin'ny chipset VIA sy ny toy izany.
Salama namana, ny fanontaniana dia izao: manana Fedora 17 napetraka ao amin'ny masiniko birao aho ary te hanatsara ny Fedora 19, efa manana ny sary amin'ny DVD aho. Ahoana no anaovako azy? Tsy hitako na aiza na aiza ny safidy (toy ny teo aloha) hanavao ny kinova Fedora teo aloha.
Valiny tamin'i Vic
Mba hanatsarana ny Fedora 19 dia tsy maintsy ampiasainao ny fedup avy amin'ny Fedora 17 mihitsy, hoy ny lahatsoratra, tao anaty console root, aorian'ny fametrahana ny fonosana fedup: "fedup –network 19".
Ao anatin'ny toe-javatra mitovy amin'izany aho ary hanavao rehefa akaiky ho lany ny fanampiana (herinandro).
Raha zavatra iray izay tsy tiako indrindra momba ny Fedora ny RPM, dia nanana traikefa ratsy tamin'ity rafitra fonosana ity (nampiasa OpenSuse, CentOS ary Fedora aho). Zavatra iray hafa tsy tiako momba an'i Fedora ny olany tsy tapaka amin'ny mpamily VIA + nouveau (Ny PC-ko taloha dia miorina amin'ny chipset VIAP4M890), manana karatra GeForce 8400 GS aho, ary satria efa nanandrana ny kinova faha-11 hatrany aho dia tsy Afaka nametraka azy aho ary nampandeha tsara azy io teo amin'ny sehatry ny sary, na dia indraindray aza, ny LiveCD dia tsy manomboka akory noho ny fikorontanan'ny kernel.
atombohy amin'ny masontsivana nomodeset ao anaty kernel, aorian'ny fametrahana Fedora dia mametraka ny mpamily NVIDIA ianao.
Efa nanandrana azy aho, miaraka amin'ny safidy nomodeset noacpi nolapic noapic, ary mbola tsy mandeha amiko io. Tsy afaka nanandrana Fedora tamin'ny masiniko aho hatramin'ny andron'ny Fedora Core 5.
Fantatro fa mahatsapa izany ry bro, nanana motherboard P4M900 + Nvidia 8600 GT koa aho. Avy amin'ny Fedora 15 dia afaka nametraka azy aho fa tamin'ny voalohany dia naharitra 5-10 minitra teo ho eo fotsiny ary voakitika, tsy nanam-potoana nametrahana ireo mpamily nvidia aho. Namboariko tamin'ny ampahany ny fanesorako ny karatra horonantsary, saingy miadana kosa ny chipset ho an'ny botika KDE sy Gnome 3 ho fallback. Ho fanampin'ny zava-misy fa lasa mavesatra ny ubuntu, tapitra rava ilay pc mahantra.
Zavatra adala izany, heveriko fa ny olana dia tsy maintsy miaraka amin'ny fanohanan'ny kernel Fedora an'io chipset io, izay tsy izany no tsara indrindra eto an-tany, fa tsy misy antony tsy hahafahako mankafy ny distro, manana aho Niezaka tamin'ny milina iray ihany, Debian (distro ankehitriny), Arch (KDE, GNOME, XFCE, Openbox ary Awesome), Sabayon (nanome ahy ilay horonana Fedora iray ihany aho fa miaraka amin'ny nomodeset sy noacpi dia mandeha tsy misy horonana ny fametrahana), na izany aza, izaho Manome fahatsapana ratsy fa ny distro malaza toy izany dia nanana "bibikely" hatry ny ela ary tsy namboarin'izy ireo izany. : /
Ary efa nitory ny bug ve ianao? Satria raha tsy izany dia ahoana no hahafantaran'izy ireo? Raha nanao izany ianao dia ampitao amiko ilay rohy izay hanampy anao hanatratra ireo mpamorona tompon'andraikitra.
Etsy ankilany, azonao atao foana ny manangona ny kernel, zavatra tsotra be izany.
Ny bibikely dia efa notaterina nanomboka ny taona 2009
Ary misy vitsivitsy hafa mitovy amin'ny ahy:
Ary momba ny kernel, fantatro fa mora ny manao azy, fa ataovy avy amina installer prompt, ampidiro ao anaty distro izy avy eo apetrakao.
Zavatra tsara amin'ny Debian Squeeze dia tsy nanana an'io olana io tamin'ny chipset VIA niaraka tamin'ny horonantsary S3 miampy (afa-tsy ireo loko).
Ho an'ny kernel ... andramo kernel 3.2 sy voila. Ampahafantaro ny bug ao amin'ny kernel.org, ny bugzilla, hisy hamaly azo antoka.
Ity reny ity dia manana chipset VIA, izay hatrany am-boalohany ... manasa anao aho hametraka karatra wifi ao anaty pci, miaraka amina chipset atheros ary ndao hojerentsika izay mitranga ... manantona ... tokony nanafaka patch ny atherosy.
Chipset misy olana io, saingy mahaliana ny mahita raha sendra anao amin'ny Fedora na amin'ny distro Linux rehetra, satria ny kernel dia kernel ... ary tsy olana Fedora intsony izany, fa tokony hampiakarinao hatrany ambony, kernel.org, raha ny marina. Notateriko tamin'ny intel ny olana iray ary namboarin'izy ireo izany (ireo avy amin'ny kernel.org).
Tsara raha mitatitra ny bibikely farafaharatsiny ianao mba hahafahan'i Fedora mampiakatra ny raharaha amin'ny kernel.org ary hamaha ny olana.
Manomboka izao dia lazaiko aminao fa ny tabilao SIS na VIA tafiditra dia maharikoriko ny fandehany amin'ny Linux, izany no tantara ... tsy resaka distro io.
"Debian (distro ankehitriny), Arch (KDE, GNOME, XFCE, Openbox ary Mahatalanjona), Sabayon (nanome ahy ilay horonana Fedora iray ihany aho fa niaraka tamin'ny nomodeset sy noacpi dia tsy nisy horonana ny fametrahana)"
Olana kernel io fa tsy Fedora. Ary raha mandeha miaraka amin'ny nomodeset sy noacpi ianao, dia bug 2 ireo, ny karatra horonantsary VIA mitsoka, ary izany dia olana iray izay tsy mijanona ao anaty kernel intsony, satria tongava ... anio dia ati, nvidia, intel in izy rehetra ny ankamaroany, dia tapitra ireo fotoan'ny trident, S3, ary ny taloha.
Ny faharoa, noacpi, dia ilay chipset ihany koa, ary angamba miaraka amin'ny fanavaozana BIOS dia hamaha izany ianao.
Raha tianao araka ny voalazan'ny Alemanina dia tatero izany dia homenay anao ny lohahevitra.
benj dia hoy izy:
SINCE VERSION 18 Izaho dia nametraka izany ary nanatsara ny endrika ivelany amin'ny fomba maodely; FA TSY AZO HITADIKO NY FOMBA HANORATRA NY MPISORATRA samihafa (APACHE, MYSQL, ETC) izay tena tsotra dia tsotra INO LINUX IZAY, NANANA ENTRY IREO FANONTANIANA CONFIGURE IANAO ARY FIDIN'NY SERVICES TSY MISY INDRINDRA HANOMPOANA NY SERVICES AZA MANOMBIM-PANOMPOANA. ARY mbola tsy namakafaka indray aho
Valiny tamin'i Benj
eto no hahitanao ny mazava
Miala tsiny fa manontany an'ity eto aho fa nandefa google aho ary tsy nahita valiny. Manana solosaina finday misy tetezana i5 ivy fototra misy igp hd4000 sy sary amd natokana aho, ny olana dia ny mamantatra ireo sary 2 araka ny lspci fa ny intel ihany no ampiasainy.
Ny tadiaviko dia ny hampiasàny ny amd amin'ireo mpamily maimaimpoana (ka tsy dia mampiasa bateria loatra izy) fa tsy haiko ny fomba, raha misy afaka milaza amiko hoe tiako ny mankasitraka azy
PS: Mampiasa ny Fedora 19 aho.
Rahalahy mankanesa any amin'ny forum manao post ary manontania 🙂 http://foro.desdelinux.net/viewtopic.php?id=1568 Amin'ity lahatsoratra ity dia nisy nanontany zavatra mitovy aminao fa amd ... talohan'ny ATI dia mieritreritra aho ... ampio bebe kokoa info ary azo antoka fa misy olona hanampy anao, arahaba.
ny amd miaraka amin'ireo mpamily maimaimpoana dia mampiasa bateria betsaka kokoa noho ny intel.
Ampahatsiahivinao ahy ny fotoana nataon'ny olom-pantatro nanavao an'i Ubuntu sy ny horonantsary iray manontolo nohamboarina, soloina ny mpamily NVIDIA amin'ny Noveau tsy misy ilana azy.
Io no mety ho ny tsara indrindra amin'ny Fedora ankehitriny, na dia tiako indrindra aza ny kinova 14.
Raha izaho dia nanandrana azy tamin'ny solosaiko aho saingy manome olana ahy amin'ny sary izany, ny fotoana fanohanana kely dia iray amin'ireo zavatra manana fatiantoka ho an'ity distro ity.
Noho io antony io aho dia mijanona miaraka amin'i Rosa Fresh izay tsara indrindra.
Eny tompoko, ny distro Linux tsara indrindra miaraka amin'ny Gnome 2.x dia ny Fedora 14, na dia ny Fedoras teo aloha aza.
www.karsonl.org dia hoy izy:
Namaky metatra aho ary najanoko ny famakiana.
Valio ny www.archlinux.org
Nijery Linux From Scratch aho fa tsy namaky anao.
Oad! Tena barbariana aho, tsy ho afaka hatory ...
Rosa Fresh R1 dia naharitra herinandro aho… miadana be ny manomboka ary manomboka mihantona; Niverina tany amin'ny Kubuntu 13.04 aho izay mandeha toy ny balafomanga !!!
Hanao ahoana ny Fedora 19, iza no nankasitraka izany?
Napetrako io. Andramo fa mety be.
Nanandrana azy tamin'ny XFCE aho ary tsy tiako izany 🙁
eny, ny installer (Anaconda heveriko fa niantso azy) dia tena tsara, tena milamina ary mora ampiasaina 😀
Tena tiako ny Fedora fa najanoko ny fampiasana azy noho ny AMD Privative Drives
Nametraka azy tamin'ny andro voalohany niaraka tamin'i Gnome aho, ary mandeha raha tsapanao ny fiovana raha ampitahaina amin'ny kinova 18, malalaka kokoa, haingana kokoa, milamina kokoa, tsy nanome lesoka tamiko izany ary efa nametraka sy nanavao fonosana maro aho. Ny hany zavatra tsapako ho hany ila malemy fotsiny dia ny Anaconda, mbola manahirana azy amin'ny fizarazaran-tany, manomboka eo amin'ny majestic araka ny nandrasana ary tsy nisy olana ny miasa tontolo andro.
Ny zavatra tsara momba ny Fedora: mpiorina Anaconda tsy manam-paharoa amin'ny endriny sary (tsy mitovy ny lazaiko momba ny maody console); fandaharana iray andro sy GNOME 3.8 miaraka amin'ny Classic Shell mba tsy hahavery ny fahazarana (na dia aleoko aza Mate ho an'ny traikefa maivana kokoa).
Ny ratsy: ny installer Anaonda miaraka amina maody sary dia mandany horonantsary marobe (96 MB) raha oharina amin'ny installer Debian sary; Izy io dia amin'ny famoahana limbo (tsy maranitra toy ny Arch fa tsy mijanona toy ny Ubuntu Release na Debian Testing); natao ho an'ny fampiasana ao an-trano ihany (andraso mandra-pamoahana ny RHEL / CentOS 7 raha te hampiasa kinova "stabilized" an'ny Fedora ianao).
Raha ny fahitana azy, ity kinova ity dia fanatsarana ny Fedora 18 izay notadiaviko teo aloha ary tsy tiako izany satria tsy nanana ilay akorandriaka GNOME 3.8 mahazatra.
Efa nandramako ny Fedora tamin'ny Kanelina, LXDE na Mate, manidina fotsiny ry zareo!
xoanton dia hoy izy:
TSY MAHAY MAMETRAKA IZANY, mijanona kely mihoatra ny fakana ny 4 amin'ilay lahatsoratra aho fa tsy mamela ahy hisafidy ilay fizarazarana (Satria manana 3so-windos ho an'ny asa aho, ubuntu ary paticion linux iray hafa hanandramana distros miaraka amin'ny OPEM SUSE misokatra dia korontana, nanjavona tao amin'ny menio fanombohana i windos ary tsy maintsy nametraka ny zava-drehetra aho, nanandrana ny ANTERGOSY THE SAME. Ankehitriny manana linux mint) hafa ny mpampiditra an'i Fedora alohan'ny ilazako aminao ny antony nanandramako azy vetivety ary afaka nametraka azy, ankehitriny tsy Afaka manao tsy mety aho ... fanampiana kely vilany avor?
Mamaly an'i xoanton
Sahirana be aho nametraka (tamin'ny resaka fisafidianana ny partitions hampiasana) Fedora 19, tena sarotra tamiko haha ​​saingy tamin'ny farany dia nahavita nametraka ny Fedora 19 niaraka tamin'i Gnome Shell 3.8 aho ary tena milamina ary tsy misy olana, heveriko fa mendrika hapetraka izany.
Ny hany zavatra tokony hiovako na hatsaraiko dia ny mpampiditra avy eo dia milamina ny zava-drehetra.
Lohahevitra tsy fantatra: fantatrao ve ny fomba famahana ny olana SHA1 ateraky ny CentOS rehefa mandoro ny ISO aho? Satria nandoro ireo DVD CentOS 6.4 roa ny olom-pantatro iray ary toa simba ilay rakitra SHA1 ary tsy afaka nanohy ny fametrahana azy.
Voalohany - Ampidino amin'ny alàlan'ity terminal ity ny isosanao nefa tsy miorim-paka:
Fitsapana faharoa md2 miaraka amin'ny programa fandraketana k5b:
Faha-3 Raha mifanaraka ny isa dia azonao atao ny manangona amin'ny k3b tsy misy olana. Ny k3b dia tsy atoro ahy fotsiny satria matetika dia namoaka lesoka ny brazier rehefa nanoratra.
Rohy fampidinana haingana any Amerika Latina:
jereo ny fidirako etsy ambony 😀
Tsy afaka nametraka azy aho, tsy fantatro izay nitranga fa ny installer graphique dia tsy namela ahy hahita ny bokotra ambany ... Niverina tao amin'ny Kubuntu aho izay tsy manome ahy olana velively hametrahana sy miasa eo noho eo.
haaay fedora ... ny fitiavako mandrakizay an'i Fedora, io no distro tiako indrindra, hatrizay niaraka tamin'ny Fedora core ary na dia Red Hat Linux aza, saingy ilay kinova 18 dia fiasco azoko lazaina azy, nampidina ny version 19 aho tamin'ny Fedora Mate, satria ny Ny Fedora version 14 no farany niaraka tamin'ny gnome 2, efa nanandrana aho ary faobe, hatsaran-tarehy, hehehe inona no tadidio ... fa mbola eto amin'ny Xubuntu aho hijery raha sahy mametraka (mieritreritra aho) miarahaba!
Ny olana mahazo ahy dia ny tsy toa ny installer teo aloha, izao tsy afaka mametraka mihoatra ny tontolo birao tokana amin'ny DVD aho taloha. Raha teo alohan'ny nisafidianako, raha tiako, Gnome, Xfce na Lxde na izy efatra dia miaraka. Nefa efa sahady. tsia, na farafaharatsiny tsy vitako. Misy fomba ve?
Mamaly an'i gabo
maha-mpamahana sakafo azy, satria ny andiany 18 dia manahirana tokoa ny mametraka azy
Amin'ny maha Redhatrista sy Fedorista azy, ratsy ny Fedora 18. Fa izany dia mitranga amin'ny fizarana ity sy ny hafa rehetra.
Saingy hafa ny Fedora 19, mahafinaritra izany. Vatosoa: tsy mandeha izy fa manidina.
Ary i Anaconda dia miasa toy ny manja ankehitriny. Tsy mbola nisy distro haingana sy mora apetraka toy izao.
Tsara, ekipa Fedora !!
Fantatro fotsiny ny Fedora tamin'ny andiany 18 indrisy, fa izao nanoratra hatramin'ny 19 taona izao, nitia tamim-pahatsorana aho, tsy nanana hadisoana, niaraka tamin'ny masinina nohavaozina, napetraka ny fampiharana, mandeha mandritra ny tontolo andro, haingana, maivana, milamina, afaka, tsy afaka tonga lafatra kokoa.
Manome ahy olana amin'ny uefi izy, manome ahy fahadisoana ny installer rehefa te-hametraka ny bootloader aho, namaha azy tamin'ny fametrahana ny kinova 18 sy fanavaozana azy amin'ny feedup, toa niasa tsara ny zava-drehetra mandra-panaoko ny fanavaozana azy ary ankehitriny dia tsy manomboka marika «ny asa fanombohana mihazakazaka ho an'ny NetworkManager "toy ny amin'ny Sendmail, rehefa vita ny zavatra nataony dia nilaza tamiko izy fa tsy nahomby ary mijanona ao amin'ny" nahatratra ny interface graphique kendrena ", tsy hitako izay hatao 🙁. Hatreto mbola tsy vitako ny namaha azy.
inona ny teny miafina faka hahafahana manao izany rehetra izany
Te hahafantatra aho daleee
Izaho dia nametraka ny Fedora 18 ary nanana olana kely momba ny fanekena ny fitaovana, ary niadana be ny gnome3. Nametraka ny Fedora 19 aho ary naharesy ny zava-drehetra. Voamarika ny fampiasana kely kokoa ny enti-manana fitaovana ary nitombo ny hafainganana. Mba hijerena ny installer voalohany ao amin'ny Fedora Anaconda dia mamela be dia be ny faniriana amin'ny fitantanana fametrahana kapila. Little customizable.
Fedora dia mendrika ny hanome soso-kevitra ao amin'ny kinova fototra gnome 3
Salama namana misaotra noho ny fandraisanao anjara fa manana olana kely aho, rehefa nametraka ny Fedora 19 niaraka tamin'ny kde tamin'ny solosaina finday Lenovo G480 tamin'ny intel core i3 64bits aho, ny zavatra voalohany tokony havaoziko ary nanana ny kernel 3.9.5-301.fc19.x86_64 ary ankehitriny Izy io dia manana kernel iray hafa izay tsy mifehy ny famirapiratan'ny efijery, ao amin'ny folder / sys / class / backlight dia manana acpi0_video sy intel_backlight aho ary efa voamarina fa mila ny intel_backlight fotsiny aho hifehezana ny famirapiratana, ary rehefa manomboka ny solosaina findainy aho dia misafidy Ny kernel voalohany izay tsy ilaiko ary ny safidy faharoa dia ny kernel 3.9.5-301.fc19.x86_64 ary misafidy ny kernel faharoa aho, lazao amiko fa hisy fomba sasany hanafoanana ny acpi0_video na hametrahana ny kernel faharoa amin'ny filaharana voalohany, misaotra anao tamin'ny fanampianao
Osmany dia hoy izy:
Salama, noho ny antony niasa dia tsy maintsy niditra tamin'ny tontolon'ny centos / redhat / fedora aho, ny zavatra nampiasako foana dia ubnutu na debian, ary avy eo ny olan'ny repo ao amin'ity distro ity dia nandaniako asa, ny fomba hanampiana azy ireo Izy io dia lisitry ny loharanom-pahalalana ubuntu, ary ataovy fitaratra hahitana azy ireo eo an-toerana rehefa tsy misy Internet, misy forum, tranonkala na inona na inona fanazavana
Valiny tamin'i Osmany
Hatramin'ny Linux efa an-tserasera nandritra ny 2 taona